Saturday June 15, 2019 - 15:03:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qaraxyo waaweyn oo kala horreeyey daqiiqado kooban ayaa duhurnimadii maanta gilgilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo jugtooda laga maqlay degmooyin badan oo ka tirsan magaalada iyo daafaheeda.
Mid ka mid ah qaraxyadan ayaa lala eegtay Koontarool ku yaalla agagaarka Isgoyska Sayidka oo laga ilaaliyo dhismaha baarlamaanka DFS, iyadoona lagusoo waramayo in qaraxaas uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa galaaftay nolosha maleeshiyaat fara badan oo ka tirsanaa hay’adaha amniga iyo shaqaale katirsan hay’adaha DFS oo ka dhawaa halka uu qaraxu ka dhacay.
Daqiiqado kadib qaraxaas waxaa dhacay qarax kale oo aad u xoogan kaas oo lala eegtay koontarool kale oo laga galo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kaas oo isna geystay khasaare kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaatkii ku sugnaa halkaasi.
Xarakada Mujaahidiinta ayaa sheegatay mas’uuliyada qaraxyadan waxayna sheegtay inuu bartilmaameedku ahaa labada koontarool ee laga ilaaliyo dhismaha baarlamaanka iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Sarkaal u hadlay Xarakada Al-Shabaab ayaa idaacadda Andalus u sheegay inay qaraxyadan qeyb ka yihiin silsilado weeraro ah oo ujeedkoodu yahay in lagu burburiyo koontaroolada lagu dhibaateeyo dadka Muslimiinta ee ay joogaan maleeshiyaatka ‘Ashahaada la dirirka’ ee DFS.
Hay’adaha amniga ee DF ayaa xiray inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho bandowna kusoo rogay degmooyinka gobolka Banaadir si ay u hor istaagaan weerarada Xarakada Al-Shabaab hadana sidaas oo ay tahay illaa hadda uma suuragalin in ay ka hortagaan qaraxyada lagu beegsanayo saldhigyadooda iyo xarumahooda Muqdisho.